विवाहपछि यौन चाहना नभएमा के गर्ने ? -
Sunday August 25, 2019 |
विवाहपछि यौन चाहना नभएमा के गर्ने ?
१० कार्तिक २०७५, शनिबार २३:५९ 646 पटक हेरिएको
यौन चाहना नहुने विभिन्न कारण हुन्छन् । जसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण रागरसको गडबडी हो । त्यस्तै व्यक्तिले उच्च रक्तचाप, मनोद्दिपक (मानसिक रोग) को औषधि र मधुमेहको औषधि सेवन गरेको अवस्थामा पनि उसमा यौन चाहना नआउन सक्छ । यसका साथै आफ्नो दिनचर्या निकै व्यस्त हुने व्यक्तिमा थकान र विभिन्न तनावले मानसिक रुपमा तयार नहुनाले पनि व्यक्तिमा यौन चाहना नआउन सक्छ । यसका साथै केही हदसम्म वंशाणुगत गुणका कारणले पनि यौा चाहनामा फरक पर्न जान्छ । तर यी समस्या परामर्शको माध्यमबाट हल गर्न सकिने यौन विशेषज्ञ बताउछन् ।
यौन इच्छा नआउनु कुनै रोग होइन र यसले शरीरमा कुनै किसिमको हानी गर्दैन् । मानिसलाई यौनको आवश्यकता पर्छ । किनकी मानिस यौनिक प्राणी हो । तर यौन सम्पर्क नराख्दैमा मानिस बाच्दैन भन्ने होइन । यौन सम्पर्कबाट टाढा रहदा अझ एचआईभी एड्स तथा यौन संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । त्यसैले यौन चाहना नहुनु धेरै ठूलो समस्या होइन । तर विवाह पछिको यौन सम्बन्धमा भने यसले केही प्रभाव पार्छ नै । श्रीमान्लाई यौन चाहना भइरहने र श्रीमतीलाई यौन चाहना नहुदा समस्या पैदा हुन्छ । श्रीमानको इच्छा पुरा गर्न पनि श्रीमतीले यौन सम्पर्क राखिदिनु पर्ने सचन हाम्रो समाजमा छ । यसका साथै श्रीमतीले यौन चाहना नै छैन भनेपछि श्रीमानले शंकाको दृष्टिले हेर्ने परम्परापनि समाजमा छ । त्यसैले यौन चाहना नहुनु कुनै रोग नभए पनि विवाह पछिको यौनले विशेष महत्व राख्छ ।
त्यसैले कसरी हुन्छ, विवाहपछि श्रीमान श्रीमतीबिच सहमतीमा यौन सम्पर्क राख्नु पर्छ । र एकले अर्काको भावना बुझ्नु पर्छ । यौन चाहना कम हुदैमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने संस्कार हटाउनु पर्छ । किनकी यौन चाहना व्यक्ति व्यक्ति फरक हुनसक्छ । इच्छा वेगर गरेको यौन सम्पर्क वलत्कार हो ।
फरार दुई बलात्कार आरोपित
बलात्कारको आरोपमा बाबु पक्राउ
सेक्स गर्दा किन आवाज
‘एकताको गरेर सही अभियान थाल्दा बदमासहरुले जनतामा भ्रम छरेर बाँधा पुर्याउन खोजे’
उपेन्द्र यादवका सल्हाकारले रबिलाई दिए पार्टी खोल्ने सल्लाह
सङ्घीय समाजवादी शिल्पी र दलित शक्ति नेपाल बीच समायाेजन
पुडासैनीको आत्महत्याः रविका भक्त–एक पेगमा बिकेका पत्रुकार!
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै नेता राईले भने- ‘संविधान विपरित गरिएकाे विज्ञापन गलत’
सांसद यादवले दिए मुख्यमन्त्रीलाई ठाडो चुनौती, ‘राजधानी जनकपुर कुनै हालतमा हुन दिन्न’
रवि लामिछाने पत्रकार हाेइनन्– किशोर श्रेष्ठ
वरिष्ठ नेता नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीले एक पद छाड्नुपर्ने अडान
उच्च अदालतका न्यायाधीश अधिकारीले दिए राजीनामा
पत्रकार महासंघको केन्द्रीय टोलीले रवि र युवराजलाई भेट्यो, बिना पूर्वाग्रह अनुसन्धान गर्न आग्रह
काँग्रेस सांसदकाे सरकारलाई ठाडाे चुनाैती : हिम्मत छ भने कश्मीर समस्याबारे बोलोस्
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा मेयर रेनुले निकालिन् यस्तो विज्ञप्ति
घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृतीका लागि बाटो खुल्याे
भूकम्पपछि पुननिर्माणका लागि बल्ल भारतद्वारा नेपाललाई सवा तीन अर्ब
रवि लामिछानेसहित तीन जनामाथि थप अनुसन्धान, फेरि ५ दिन थुनामा राख्न आदेश